Ndazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla? Fumanisa ukuba kuya kufuneka uyikhuphe okanye hayi | I-Androidsis
UPablo Aparicio | | Ukukopela kwe-Android, Tutorials
¿Ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla? Ukuba nefowuni yasimahla kusivumela ukuba sikwazi ukuyisebenzisa ngayo nayiphi na into esetyenziswayo, kodwa asinakusoloko sikwazi ukuhlawula ixabiso lefowuni yasimahla ngokwethu kwaye ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwemali. Into eqhelekileyo, nangona incinci kwaye incinci iyenziwa, kukuthatha ifowuni ngomntu ngamnye, nto leyo eya kusenza sibe nokusisigxina kwaye asiyi kuba nakho ukusebenzisa ifowuni nomnye umsebenzisi ... ngaphandle kokuba siyikhuphe. Kodwa sazi njani ukuba iselfowuni yethu isimahla okanye akunjalo?
Kule posi siza kuzama ukusombulula onke amathandabuzo akho, siqala ngokukuxelela into ekufuneka uyenzile ukuze ufumanise ukuba ungasebenzisa iselfowuni yakho ngomnxibelelanisi owahlukileyo kunalowo ubonelele ngayo. Ukuba awukwazi, siza kukufundisa uyikhulula kanjani (ngakumbi ngakumbi, sikuxelele phi) kwaye ukuba singaphulukana nesiqinisekiso ngenxa yento yokuyikhupha.
1 Ndingazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla?
2 Ngaba iselfowuni ivulwe simahla?
3 Ukuvula iselfowuni yeMovistar
4 Vula iselfowuni kwiVodafone
5 Vula iselfowuni kwiOrange
6 Uvula njani iselfowuni nge-IMEI?
7 Ngaba iwaranti yokuvula iselfowuni ilahlekile?
Ndingazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla?
Ukuba sifuna ukufumanisa ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla okanye sinokuyisebenzisa kuphela nomsebenzisi esifumana ngayo, sinokukhetha:
Eyona ndlela ilula yokwazi ukuba iselfowuni yethu isimahla, ukuba kunokwenzeka ukubeka i SIM khadi evela kumsebenzisi owahlukileyo osinike yona ngeselula. Ukuba iselfowuni iyasebenza, ifowuni yethu isimahla. Ukuba ayisebenzi kwaye siqinisekile ukuba iSIM khadi iyasebenza, iselfowuni yethu ayikhululekanga.
Kukho enye indlela, eyenye usebenzisa ikhowudi yohlobo lwayo ukufumanisa. Njengemizekelo yezinye zeempawu ezaziwayo ezisebenzisa i-Android, unale ilandelayo:
Ikhowudi ye-Samsung esinayo yile: 7465625 #
Ukuba ukhetho lokuqala iphuma "icishiwe."", Ifowuni yethu isimahla. Ukuba iya "ON", ifowuni yethu ayikhululekanga.
Ikhowudi yokuvula imenyu eyimfihlo yefowuni yile: * # * # 7378423 # * # *
Isikrini siza kuvela ngeendlela ezininzi esiza kukhetha kuzo "Ulwazi lwenkonzo" kwaye emva koko "Uqwalaselo"
Masiye esiphelweni, apho icandelo "Ubume benkcubeko”. Ukuba uthi "Ewe", uyakhululwa. "Hayi" kuthetha ukuba akunjalo.
Makhe siye kuseto / malunga nefowuni /Ulwazi lweSoftware.
Ukuba inguqulelo kwi "Software Version" iphela ngo "NGEXESHA-XX”Ngaba isimahla.
Ukuba into oyifunayo yindlela yokwazi ukuba iselfowuni yam isimahla kwaye ivela kuhlobo lweHuawei, ikhowudi yefowuni yeHuawei yile: * # * # 2846579 # * # *
Singena kwimenyu yeProjekthi / Useto lweNethiwekhi /Umbuzo wesimo sekhadi leSIM khadi.
UKUBA ithi «Isimo sekhadi leSim I-NW_LOCKED»Ngaba akukho simahla.
Ngaba iselfowuni ivulwe simahla?
Ewe. Njengoko sichaza kamva, ukuba iselfowuni yethu ayisekho phantsi kwesigxina, sinokufowunela umqhubi kwaye baya kusinika ikhowudi yokuvula simahla ngaphandle kokuphikisa naluphi na uhlobo lokumelana (enyanisweni, uMovistar uyenza kunye nangaphandle kwesigxina). Kwimeko embi, kuya kufuneka senze iparipé kwaye sibaxelele ukuba ifowuni iza kusetyenziswa nekhadi elihlawulelweyo okanye nantoni na ethi qatha engqondweni. Kusenokwenzeka ukuba bazama ukusithengisela uhlobo oluthile lwesivumelwano, kodwa le yinto abayenzayo nanini na xa sifowunela okanye sibiza inkampani yolu hlobo kwaye kufuneka sinyanzelise ukuba le nto bazama ukusithengisela yona ayinamdla kuthi.
Ukuba oku kungentla akuyiyo inketho, sinokuzama usetyenziso olufana nalo unalo ngezantsi. Ezi izicelo Abasebenziimimangaliso, kodwa kubonakala ngathi iyasebenza kwimeko enye kwezi zimbini, ngenxa yoko asilahlekelwa nto ngokuzama. Into eyenziwa sesi sicelo kukusinika ikhowudi yokuvula ekuya kufuneka siyivavanye ukubona ukuba iyasebenza okanye ayisebenzi. Ukuba ayisebenzi, sinokuhlala sizama indlela endibonelela ngayo kamva.
Ukuvula iselfowuni yeMovistar
Njengoko sifunda kwiphepha lenkxaso ye Movistar, umsebenzisi ohlaza okwesibhakabhaka «Simahla simahla kubo bonke abathengi izixhobo zabo zeMovistar eziphathwayo ezihamba neSIMLOCK. Ngoku nakumthengi ngokusisigxina (okunxulunyaniswa nesiphelo sabo) ». Ukuba kufuneka ndinyanisekile, le yokugqibela iyandothusa kwaye iya kundenza ndiphonononge okubhaliweyo kule post. Ukuvula ifowuni yeMovistar siza kwenza oku kulandelayo:
Sibiza 1004 kwaye ucele ikhowudi yokuvula.
Xa besicela i-IMEI yesiphelo, sibanika nje. Kule posi unolwazi oluchaza ukuba ungayifumana njani i-IMEI yefowuni.
Okokugqibela, singena kwikhowudi abasinike yona. Njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi yabo, ikhowudi inokuvavanywa ukuya kuthi ga kumaxesha ali-10 ngaphandle kokuthintela izixhobo. Emva kweenzame ezili-10, i-terminal iyajinga.
Vula iselfowuni kwiVodafone
inthanethi Ikwakhulula iifowuni eziphathwayo simahla kodwa, ngokungafaniyo neMovistar, iya simahla kuphela iifowuni ezingasasebenziyo. Ukucela ikhowudi yokuvula yesiphelo seVodafone, siya kwenza oku kulandelayo:
Singena kwinkonzo yam yevodafone kwiwebhusayithi yayo okanye ngokuthe ngqo kwi-www.vodafone.es/mivodafone.
Ngaphakathi kwenkonzo, kuya kufuneka sikhethe umgca wefowuni esifuna ukuwukhulula.
Cofa kwithebhu Unomyayi wam Ewe kwaye sikhetha Unomyayi wam.
Emazantsi ephepha kukho ukhetho lokuvula iselfowuni. Kweli candelo, singena kwi-IMEI kunye nedilesi ye-imeyile apho siza kufumana khona ikhowudi. Kwisithuba seeyure ezingama-48 baya kusithumela ikhowudi yokuvula kunye nemiyalelo yokuyifaka kwiselfowuni yethu.
Sifaka ikhowudi kwaye siyivule.
Vula iselfowuni kwiOrange
Andiqinisekanga ukuba orenji khupha iselfowuni simahla, ndiza kuthi kuphela banephepha elikhoyo (iyafumaneka APHAukucela ukuvulwa kwesiphelo sendlela. Sinako ukubiza 1470 (umntu ngamnye) okanye 1471 (iinkampani) kwaye ucele ikhowudi yokuvula.
Uvula njani iselfowuni nge-IMEI?
Vula iselfowuni IMEI Ihlala ifana, nokuba yeyiphi into esisixhobo sayo. Ngokusengqiqweni, inyathelo lokuqala iya kuba kukwazi ukuba yintoni i-IMEI yefowuni esifuna ukuyivula kwaye le yinto esinokuyenza ngeendlela ezahlukeneyo:
Indlela eya kusebenza ngayo nayiphi na into ehambayo kwaye yiyo loo nto ndisithi eyokuqala yile Ikhowudi ye-06. Ukwenza oku, siya kulandela la manyathelo:
Sivula isicelo sefowuni.
Ukuba asiyifikeleli ngokuthe ngqo, sichukumisa ukhetho oluya kusisa kwikhibhodi, sichwetheza * # 06 #. Inombolo ye-IMEI iya kuvela kwiscreen.
Ukuphuma, sichukumisa Kulungile, Yamkela okanye isicatshulwa esisibeka kwimodeli yethu yeselfowuni.
Ukusuka kuseto lwefowuni. Enye indlela yokufumana inombolo ye-IMEI kukuyikhangela kuseto lwefowuni, kwicandelo lolwazi apho siza kubona uguqulelo lwe-Android kunye nolunye ulwazi oluninzi kwisiphelo sethu.
Ukujonga ebhokisini. Enye indlela elula yokufumana i-IMEI yefowuni yakho kukujonga ibhokisi. Ihlala ingemva, apho imodeli yesixhobo ikhoyo, nangona sinokuba nefowuni ibhokisi yayo enganikezeli ngolu hlobo lolwazi.
Ngoku ekubeni sisazi ukuba yintoni i-IMEI yesiphelo sethu, sinokhetho oluninzi, kodwa ezi-2 zezona zisetyenziswayo kwaye zisebenza ngokufanelekileyo:
Unako vula iselfowuni kwikhonkco esikushiye nje
Ukuba iselfowuni yethu ayisaphili ngokusisigxina, eyona nto ilungileyo yile Tsalela umnxeba umsebenzisi kwaye ucele ikhowudi ukuba uyikhulule. Le yinto umntakwethu ayenzileyo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye kule meko wayenza kwiselfowuni ukusukela ngo-2008. Sixelela umsebenzisi ukuba yeyiphi imodeli yeselfowuni esinayo kunye ne-IMEI yayo kwaye ngemizuzwana baya kusixelela ikhowudi yokuvula kunye nemiyalelo ye yazise.
Ukuba asikwazi ukucela ikhowudi kumsebenzisi wethu, i-Androidsis isebenza kunye Sim Unlock Service ukukunika inkonzo ekhawulezayo nethembekileyo onokuvula ngayo nayiphi na ifowuni. Ekuphela kwento ekuya kufuneka siyenze yile:
Ngenisa le webhusayithi simahla
Endaweni yokuxelela umqhubi i-IMEI, siya kuxela Sim Unlock Service.
Sisebenza kwaye sihlawulela inkonzo yokuvula kwiwebhusayithi yakho.
Silindele ukufumana ikhowudi.
Sibeka i-SIM khadi evela komnye umsebenzisi kwifowuni yethu
Ekugqibeleni, singena ikhowudi yokuvula kwaye wamkele.
Sele ufunde uku ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla kananjalo, ukuba ibotshelelwe kwinkampani yakho, ubone indlela yokuyikhulula simahla okanye usebenzisa inkonzo yomntu wesithathu.
Ngaba iwaranti yokuvula iselfowuni ilahlekile?
Umcimbi weziqinisekiso uhlala ukhohlisa. Ukuba sineselfowuni eqhagamshelwe kwinkampani, sinokuyikhupha ngeendlela ezimbini kuphela: xa sisenokusisigxina okanye xa singenayo. Ukuba singasekho isigxina, umqhubi unyanzelekile ukuba asinike ikhowudi yokuvula simahla, ke ngekhe siphulukane nesiqinisekiso phantsi kwawo nawuphi na umxholo. Ukongeza, ukuba asisenalo ixesha lengqesho kwaye ibiziinyanga ezingama-24, asisayi kuba nesiqinisekiso.
Ingxaki inokuza ukuba sikhupha iselfowuni esaxhomekeke ekusisigxina. Umsebenzisi akathandi ukwazi ukuba sikhuphe iselfowuni "ukuba siyisebenzise nenye inkampani, enyanisweni, kutheni le nto sayikhupha, akunjalo? Ngokusemthethweni, ukuvula iselfowuni akufani Ingcambu okanye utshintshe iROM, oko kukuthi, asenzi naluphi na uhlengahlengiso lwesoftware olunokuthi lonakalise ukuthembeka kwalo, ke iwaranti kufuneka igcinwe. Ewe kunjalo, njengesiqhelo kukuba kufuneka sisiwe kumqhubi ukuze ayilungise, kungcono ukuba singathethi nantoni na ukuba siyikhuphe ukuba abasibuzi, ukuba abayithathi, mabaqale iinkqubo ukuze baphathe. ngaphandle kokulungiswa kwaye ulinde ukusombulula ingxaki yethu.
Ngaba sele ufumanise ukuba iselfowuni yakho isimahla kwaye ungayisebenzisa nomnye umsebenzisi? Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga ungazi njani ukuba iselfowuni simahla okanye hayi, sishiya uluvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukukopela kwe-Android » Ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla
UNacho Balaguera C. sitsho
Ukulandelelana akusebenzi kwi-Samsung
Phendula kuNacho Balaguera C.
Uxolo kodwa NGOMTHETHO (eSpain) zonke iifowuni eziphathwayo abathengisi bazo kufuneka UZE SIMAHLA KANYE NOKUBA BAZE BAVALWA, ukukhululwa kwabo KUSIMAHLA. Ukuza kuthi ga ngoku abakwenzanga kwaye abanye bafuna ukubeka imbasa yokuba silungile yenye into, kodwa abaqhubi abanjengoGalician R bahlala bezithengisa simahla ngokuthobela umthetho wangoku.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga noku, khangela i-FACUA kwinjini yokukhangela oyithandayo kwaye baya kukucacisela ukuba injani na le nkqubo.
Mirel umntu sitsho
Lumka, iBootloader ayinanto yakwenza nokuba ikhutshiwe, ukuyibuyisa ayikhuphi nayo. Guqula i-rom nokuba yeyokuba (ukuba itshintshiwe kakubi ungaphulukana ne-imei) Ikhutshwa kuphela yinkampani x imei okanye ngebhokisi yomlingo
Phendula uMirel Man
URonald Leiva (uMotursa) sitsho
Ukulandelelana kwesamsung nguMuuuuuuuuuuuy umdala, oku kwakusetyenziswa kuphela kwiifowuni ukusukela ngo-2005 ukuya kamva, oku kulandelelana akusebenzi nakwiGPS S1
Phendula URonald Leiva (Motursa)
Kulungile, kuyinyani, ngoku kukho umthetho osebenzayo ofuna ukuthengiswa kweeselfowuni ezikhutshiweyo kodwa ezo bezithengisiwe ngaphambi kwalo mthetho azikho, kwaye ikhowudi iyandisebenzela kwaye ndifumana imenyu echaziweyo kunye neenkampani ukuba musa ukuhambisa amaxwebhu anje ngokuba iselfowuni yeyakho, ayikhutshwa ngenxa yomngcipheko wokuba inokubiwa
Yintoni ukulandelelana ngokuchanekileyo kwe-Samsung ye-S5 ??? Le ipapashiweyo ayisebenzi kum kwaphela
Ke ndiyayazi okanye akuyazi le nto bakuxelela yona apha kuba enye, xa ubona oku kwaye ufunde iikhomenti, bayakusombulula kuba abanye besithi andilunganga kwaye kwakweli phepha linye bakuxelela ukuba ukhululwe okanye awukhululwanga, bayakuchaza ukwazi ukuba uyakholelwa okanye hayi
Isergi Sr. Android sitsho
Kuba unokubeka enye i-sim kwenye inkampani
Phendula kuSergi Sr. Android
Hayi, ikhowudi ye-Samsung ayisebenzi ayikho enye indlela yokwazi ukuba ikhutshiwe
Molo, ndifuna ukwazi ukuba iselfowuni ye-LG VS810PP inokukhutshwa ukuze iyisebenzise nenkampani yeTelcel
kwaye ukuba ithi kwi-huawei »i-SIM ivuliwe, nceda waziswe ukuba! ?? kuba andikwazi ukubiza okanye ukufumana, kodwa ukuba ndisebenzisa 4g